बौद्धमा सुतेकै कोठामा आमाछोरी मृ’त फेला, श्रीमान् अचेतवस्थामा – Sidha Kura
ह्वात्तै बढ्यो छड र सिमेन्टको मूल्य, किन्नै नसकिने भयो ! कति ?
फेरी मौसमले दियो यस्तो चुनौती, मौसमविद्ले दिए चेतावनी
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बौद्धमा सुतेकै कोठामा आमाछोरी मृ’त फेला, श्रीमान् अचेतवस्थामा
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर- गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ नयाँपाटीमा एक महिला आफ्नो एक महिनाकी छोरीसहित मृत फेला परेकी छन् । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका स्थायी घर भई नयाँपाटी बस्दै आएकी २७ वर्षीया पेम्बी शेर्पा छोरीसहित मृत फेला परेकी प्रहरीले जनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीले श्रीमान् दोर्जे शेर्पा भने अचेतवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो । उनको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको बताइएको छ । राति सुत्दा हिटर बालेर सुतेको हुँदा निस्सासिएर मृ’त्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशङ्का छ । तिनको श’व परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरुको कोठामा बोलाउन जाँदा नखोलेपछि ग्राहकले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार झ्यालढोका सबै बन्द थिए । क्वाइलवाला र इलेक्ट्रिकल हिटर बालेर सो परिवार सुतेको फेला परेको थियो । (रासस)**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?